Guurre “Waxaan la kulanay wefdigii Holland u yimid in ay ka qeybgalaan dacwada ku saabsan muranka ay Kenya gelisay baddeena” – somnieuws.com
Guurre “Waxaan la…
Maxamed Cusmaan Guurre, oo ah Guddoomiye ku-xigeenka dallada FSAN, ayaa sheegay in ay caawa isaga & Guddoomiyaha dallada Dr. Cali Waare ay hoteelkii ay daganayeen ku booqdeen wefdigii dowladda Soomaaliya ay u soo dirtay in ay ka qaybgalaan dacwada ku saabsan muranka dowladda Kenya ay gelisay badda Soomaaliya.
“Wefdiga aan caawa la kulanay waxaa ka muuqatay kalsooni & rajo wanaagsan oo ku saabsan in Soomaaliya ku guuleysan doonto kiiska badda Insha ALLAAH, madaxdii FSAN ee uu horkacayay Guddoomiye Dr. Cali Waare waxay u muujiyeen wefdiga in jaaliyadaha Soomaalidu ay taageero la garab taagan yihiin” Ayuu yiri Maxamed Cusmaan Guurre, wuxuuna intaasi raaciyay in wefdiga dowladda ay dhinacooda u mahadceliyeen madaxda jaaliyada.
Guurre, waxaa kale oo uu sheegay in guddiga FSAN & wefdiga dowladda isku afgarteen in wefdigu ay la kulmaan jaaliyadaha Soomaalida ee ku dhaqan dalkan.
“Sannadihii hore waxaa dhici jirtay mudaharaadyo lagu xoojinayo mooraalka dadka Soomaalida, sannadkan Guddoomiyaha FSAN Dr. Cali Waare wuxuu sheegay in aanu jirin wax mudaaharaad ah maadaama uu jiro cudurka covid 19.” Ayuu yiri Max’ed Cusmaan [Guurre].
Guddoomiye ku-xigeenka dallada FSAN waxaa kale oo uu sheegay in qaar ka mid ah guddiga FSAN in ay ka qaybgaleen kulan lagu yeeshay aalada Zoom-ka, kulankaas oo lagaga hadlayay sidii Soomaalidu isu garab taagi lahayd musharax Nuur Iikar.
“Guddiga FSAN way is qeyibiyaan, qayb waxay tageen shirka wefdiga, qaybta kalena waxay goob joog ka ahaayeen kulan looga hadlayay sidii Soomaali dalkan ku dhaqan ay codadkooda u siin lahaayeen musharax Nuur Iikar oo u tartamaya kursiga baarlamaanka Nederlands, doorashad la filayo in ay dalkan ka dhacdo toddobaadka dambe” Ayuu yiri Guurre.